सैफलाई अपहरण गर्न चाहन्थिन् परिणीति यसकारण !
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। लिउड अभिनेता सैफ अली खानलाई दर्शकमात्र होइन, फिल्मकर्मी पनि उत्तिकै मनपराउछन् । अझ उनलाई मनपराउने अभिनेत्रीको संख्या उल्लेख्य नै छ । अभिनेत्री परिणीति चोपडा सैफलाई निकै मनपराउछिन् । उनी आफ्नो क्रश नै मान्छिन् । **यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु **
सैफप्रति परिणीतिको आशक्ति कतिसम्म छ भने उनी सैफलाई अपहरण गर्न पनि पछि नपर्ने योजनामा छिन् । ‘द कपिल शर्मा शो’को एक भागको क्लिप युट्यबुमा बलिउड गसिप गर्लको पेजले सार्वजनिक गरेको छ ।
एकपटक सैफ आफ्नो फिल्मको प्रमोशनका लागि कपिलको शोमा पुगेका थिए । त्यहाँ कपिलले सैफलाई परिणीतिको त्यो क्लिप देखाइन्, जहाँ परिणीतिले सैफ प्रति आफ्नो प्रेम देखाएकी थिइन् । त्यहाँ परिणीतिले मौका मिलेमा आफूले सैफको अपहरण गर्ने बताएकी थिइन् । उनले आफ्नो कुरा सैफकी अभिनेत्री पत्नी करीना कपूर खानलाई पनि जानकारी भएको बताएकी थिइन् ।
अब बिहे गर्न नपाइने, तीन महिने तालिम नलिई
शिदार्थ शुक्लाको निधनले विछिप्त बनेकी शहनाज कहिले फर्किन्छिन काममा ? काम दिलजितसंग सुरु गरेकी थिइन्